११ दिन देखिको अनिस्चितकालिन पाल्पा बन्द फिर्ता – Gulmiews
११ दिन देखिको अनिस्चितकालिन पाल्पा बन्द फिर्ता
२५ मंसिर २०७३, शनिबार १७:५९ गुल्मिन्युज
छिमेकी समाचार, मुख्य समाचार
पाल्पा । एघारौं दिनदेखि अनिश्चितकालीन बन्द रहेको पाल्पा पूर्ण रुपमा खुला भएको छ। संयुक्त संघर्ष समितिले लामो बन्दका कारण जनतालाई सास्ती भएको भन्दै विरोधका कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै तत्कालकालागि बन्द फिर्ता लिने र आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने निर्णय गरेका हुन्।
नेकपा एमाले पाल्पाका अध्यक्ष नारायण आचार्यले विरोधका कार्यक्रमहरुलाई जारी राख्दै बन्द फिर्ता लिएको बताए। ‘सीमाकंन प्रस्ताव फिर्ता नहुँदासम्म भने विरोधका कार्यक्रम जारी रहनेछ,’ उनले भने। शनिबार संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव भएको विरोधमा जिल्ला सदरमुकाम तानसेनलाई मानव साङ्लोले घेरियो। जिल्लाका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघले तानसेनलाई मानव घेरा भित्र राखेका हुन्।
तानसेनलाई गाउँगाउँबाट दलका कार्यकर्ताहरु ल्याएर मानव साङ्लोले एक घण्टा घेरिएको हो। संयुक्त संघर्ष समिति पाल्पाले शनिबार गरेको सभामा दलका नेताहरुले संशोधन प्रस्तावको विरोध प्रस्ताव फिर्ता नहुँदासम्म जारी रहने बताए । उनीहरुले प्रदेश नं. ५ विभाजन गर्ने अधिकार अहिलेको सरकारलाई नभएको बताएका छन्। उनीहरुले अहिलेको सरकारले देशलाई विखण्डन गर्न लागेको बताए ।
नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य ठाकुर गैरे, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति वीरबहादुर राना, नेपाली कांग्रेसका नेता राजन पन्त तथा अन्य दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्दै सरकारले पहिले गरेको सिमाङ्कनलाई कायम राख्न यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताए ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधनको प्रस्तावमा प्रदेश नं. ५ बाट झिकेर प्रदेश नं. ४ मा राखिएकोमा पाल्पाली समुदाय निरन्तर आन्दोलित हुँदै आएको छ। सीमांकनको नयाँ प्रस्ताव हिमाल, पहाड र तराईलाई विखण्डन गर्ने गरि आएकोले आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प नभएको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । -नागरिकन्युज डट कमबाट